Shil Madaxweyne – SomaliaOne News Network
Oct 25, 2016 Hussein Nur QORMO 0 2074 Views By Hussein Nur
Yuusuf Garaad oo cod idaacadda ( Radio Muqdisho) loogu tala galaya kaga duubaya Madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre xilli uu booqanayay Isbitaalka Digfeer
– Intii aan ka shaqeynayay Radio Muqdisho ayaa waxaa xafiiskiisa subax iigu yeeray Madaxa Radio Muqdisho, Maxamed Faarax Xalane Dhaashane, oo aan u maleynayo in uu ahaa ku simaha Agaasimaha Idaacadaha.
Wuxuu ii sheegay in uu iiga baahan yahay in aan galabta tago dhaarta Golaha Wasiirrada oo aan ka soo warramo.
Waxaan isku dayay in aan ka cudur daarto. Far ayaan ka dhaawacmay ka dib markii aan isaga xiray albaabka baabuur FIAT 127 ah oo G. D. ah oo Bankiga Dhiiggu uu lahaa. Waa Baabuurkii iigu horreeyay abid ee ii keli noqda. Baabuurta Dowladda ee aan ahayn kuwa ciidanka ayay summaddoodu ahayd Gaadiidka Dowladda G. D. iyo tirsi kooban oo raacsan.
Gacanta ayaa ii qoolneyd. Qalabka wax lagu duubo wuu cuslaa. Haddii aan qaado qalabkaa culus gacanta ayaa i dooganeysa, ayaan u sheegay.
Weriyayaasha qaar ayaa ka sagsaagi jiray shaqada aan dan shakhsi ahi ugu jirin sida tan oo kale. Markaa wuxuu isku dayay in uu igu khasbo. Intii aan hadalka isku celcelineynay ayay xusuusteydu dib u laabatay. Waxaan gartay in aan u baahan ahay in aan galabta tago dhaarta.
Waxaan xusuustay shil dhacay bishii May 1986. Madaxweynaha ayaa waxaa gaari ku qaaday Duqa Magaalada Muqdisho, Xasan Abshir Faarax.
Wadada Afgooye iyo Muqdisho isku xirta oo ahayd waddooyinka Gobollada midda ugu gaadiid, dad iyo xoolo badan ayay foodda saareen. Roob ayaa da’ayay, ayay wararka qaar sheegeen. durba waxay isku dhaceen baabuur kale.
Ma ahayn markii ugu horeysay ee Madaxweynuhu uu shil baabuur galo. Waxaa la sheegaa in baabuur uu isagu gacantiisa ku watay uu shil ku galay gooladda Godinlabe ee Gobolka Galguduud.
Shilka wadada Afgooye waa ka duwan yahay kii hore. Madaxweynaha waxaa madaxa ka gaaray dhaawac loo dhiman karo. Feerahana qaar baa burburay. Waxaa loola cararay Isbitaal ku yaalla dalka Sucuudiga.
Maantuu caano cabay
Idaacadda Qaranku marnaba ma sheegin sida ay Madaxweynaha wax u gaareen iyo dhaawiciisu sida uu halis u yahay.
Wasiirka Warfaafinta, Maxamed Cumar Jees, oo dhaawaca Madaxweynaha qaaday, ayaa isaga oo jooga Sucuudiga wuxuu u warramay BBC. Waxay ahayd dhowr maalmood ka dib markii uu Madaxweynuhu shilka galay.
Wuxuu Wasiirku sheegay in Madaxweynuhu uu ka jabay kalxanta. Weriyihii su’aalaha weydiinayay oo aan u maleynayo in uu ahaa Cabdullaahi Xaaji ayaa su’aalo badan weydiiyay oo ay ka mid ahayd, Miyuu raashin cuni karaa?
Maxamed Cumar Jees wuxuu bixiyay jawaab daacad ah, dhegeystayaashuna ay ka fahmeen culeyska dhaawaca Madaxweynaha, waxaanu yiri “Maantuu caana cabay” ayuu yiri Jees.
Qiyaastii bil uu Isbitaal ku maqnaa, oo dadka qaar ay isla dhex marayeen in uu Madaxweynuhu koomo ku jiro, waxaa dalka ka talinayay Jeneraal Maxamed Cali Samatar. Qof ogaa ma jirin xaaladda Madaxweynuhu waxa ay ku dambeyneyso.
Koox goosad ah oo diiddan in Samatar la wareego awoodda dalka haddii lacalla uu Madaxweynuhu ka kici waayo dhaawaca ayaa sameeyay gadood aan dibadda u soo bixin. Magac aan rasmi ahayn ayay qaateen ama lagu suntay. Dowladdiina waxay noqotay laba kooxood oo dadka iyada ka tirsan iyo dadka ka ag dhow ama u kuurgala sida weriyayaasha qaarkood ay og yihiin.
Golaha Galabta la dhaarinayo waa Xukuumaddii u horeysay ee uu Madaxweynuhu dhiso tan iyo markii uu Isbitaalka ka soo baxay, dalkana uu dib ugu soo laabtay. Labadii garab ee is-hayay labadaba dad ayaa ugu jira.
Suuqa waxaa ku jirta xan siyaasadeed oo ka deyrineysa xaaladda caafimaadka maskaxeed ee Madaxweynaha. Xataa waxaa la gaarsiinayaa in aanuu isagu ka talin ee ay dad kale dalka maamulaan.
Intaa markii aan xusuustay waxaan fahmay in aan galabta fursad u haysto in aan arko Madaxweynaha. In aan fursad u haysto in aan dhageysto hadalkiisa oo aan la tifatirin. In aan u fiirsado bal sida ay Wasiirradu ula dhaqmayaan in ay ka geddisan tahay sidii shilka ka hor iyo in kale. In inta yare ee aan qolka ku wada jirno laga yaabo in aan wax uun ka fahmo xaaladda caafimaad ee Madaxweynaha.
Waxaan markaa Dhaashane ka codsaday in aan laba weriye ku aadno munaasabadda si aan shaqada isaga kaashanno. Tii ayuu iga yeelay aniguna waan ka aqbalay.
Baabuur SBS ah ayaan qaadannay qado aan guryahayaga ka soo cunnay ka dib. Waa Landrover, midabkiisu yahay kan calanka. Ay labada albaab ee hore dushooda uga xardhan tahay saddex xaraf SBS. Iyada oo dhammaystiran, Somali Broadcasting Service ay uga qoran tahay labada dhinac. Dusha ay ka saaran yihiin dhowr sameecadood oo waaweyn oo midabka dambaska leh oo sii kala jeeda.
Markii la fariistay nin caato ah ayaa soo galay oo mid mid u xaadiriyay Madaxda isaga oo ka billaabay Maxamed Cali Samatar. Wasiirrada qaarkood xataa marka magacooda la yeeriyo iyaga oo aan soo eegin dhinaca magacooda looga dhawaaqay ayay cod nuxuus ah ku sheegayeen in uu isaga yahay magaca lagu dhawaaqay – waa i kan ama waan joogaa, ayuu falceliska badankiis ahaa.
Xataa waxay gaartay in Madaxweynuhu soo dhex galo oo ninkii magacyada xaadirinayay uu ku yiraahdo war bal u kaadi.
Jaallayaal ninkii magaciisa lagu dhawaaqo gacanta ha taago oo cod xayi ah ha ku yiraahdo waa i kan. Ilbiriqsiyo waxaan soo xusuustay sidii ay noola hadli jireen saraakiishii iyo sarkaal xigeenkii nagu tababbaray Dugsiga militeriga ee Xalane.
Markii xaadirinta la soo gebagebeeyay waxaa soo galay nin kutub sita oo aan u maleynayo in uu ahaa Sheekh Cali-Salaad. Allah hortiisa ayuu ku dhaariyaya iyada oo kaameridu ay markhaati ka tahay. Afar afar iyo shan shan ayuu u dhaariyay Wasiirrada. Sidoo kale wuxuu dhaariyay Wasiir-ku- Xigeennadii oo aan ka xusuusto Nuur Shire oo aan isku Kulliyad ahayn oo markaa uun ku biirtay Golaha Wasiirrada.
Madaxweynuhu maba leex leexan. Waxaad moodda in uu i ogyahay sababta aan u imid oo aniga uun iiga jawaabayo su’aasha madaxeyga ku jirta, laakiin aanan faruuryaheyga soo marin.
Laakiin waxaan idiin sheegayaa aniga waxaa ii dheer dhaawicii beri dhoweyd i gaaray. In aad dareemeysaan ma aqaan, ayuu yiri, laakiin haddadaas aan idinla hadlayo carabka ayaa i culus.
Waxaan idinka rajeynayaa kuwii aan ku nasto in aad noqotaan, ayuu raaciyay.
Waxaa kale oo aan idiin sheegayaa ayuu yiri, waxaa maanta keenay in munaasabadda dhaarta aan diidno Madaxtooyada in lagu qabto oo aan u doorbiday Afisyoone.
Sababtu waxay tahay sanadihii ugu horeeyay Kacaanka, waxaan ku shiri jirnay halkaan. Waxa aan go’aansanana waa ay noo qabsoomi jireen.
Waxaan hubaa in ay joogaan dad badan oo iiga xog ogaalsan, iigana dhowaa xuddunta ay go’aammadu ka soo fuliyeen iyo dariiqyada ay ka soo aroortay xogta lagu saleeyay tallaabooyinka la qaaday ama laga baaqsaday in la qaado. Qofka ama hey’adda xogta keentay iyo sida loo lafa-guray.
Aviazione, Gobolka Galguduud, Godinlabe, Maxamed Cumar Jees, Maxamed Faarax Xalane Dhaashane, Maxamed Siyaad Barre, Radio Hargeysa, Radio Mogadishu, Radio Muqdisho, Xasan Abshir Faarax
Wareysigeygii Jaalle Siyaad Kulankeygii Koowaad ee Jaalle Siyaad
Xiisad colaadeed oo weli ka aloosan...
Gobollada Soomaaliya tan iyo Xoriyaddii...
Qore : Yusuf Garaad Omar Mogadishu - Somalia Fiiro Gaar ah : Qormadan kama tarjumeyso siyaasadda iyo aragtida SomaliaOne News...